Me Razafinjatovo Willy : “Tsy ekena ny fanenjehana ny filohan’ny SMM” | NewsMada
Me Razafinjatovo Willy : “Tsy ekena ny fanenjehana ny filohan’ny SMM”
Par Taratra sur 23/05/2017
Lasa ifanenjanana sy ifanenjehana ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Tsy eken’ny mpisolovava maromaro ny fanenjehana ny filohan’ny SMM, raha ny nambaran’ny Me Razafinjatovo Willy.
“Na iza na iza, amin’izao fotoana izao, manenjika sy mitady hisambotra ny filohan’ny SMM sy mpikamban’ny sendikà rehetra, hitsangana izahay mpisolovava maromaro hiaro an’ireo olona ireo. Tsy manaiky an’izany izahay. Satria zara aza misy olona mitsangana manao ny fahamarinana, dia atao an’izany?”
Fanehoan-kevitry ny Me Razafinjatovo Willy na Olala io, manoloana ny fanenjehana ny filohan’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), Ernaivo Fanirisoa, noho ny fanaovany ny asany amin’ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine“.
Raha manao ny asany ny filohan’ny SMM amin’izao fotoana izao, sakana ary ampitahorina hoe hogadraina na hoenjehina. Manao ny asany izy amin’ny maha filohan’ny sendikà azy; alohan’ny maha sendikalista azy, mpitsara izy: manao ny asan’ny mpitsara mpampanoa.
Manana andraikitra sy adidy izy, mijery sy manara-maso ny olona eny amin’ny fonja. Raha manao izay asany izay izy, taitra ny Praiminisitra sy ny hafa hoe tsy tokony hataony izany ary tokony hoenjehina izy.
“Eo no iadiako isan’andro, raha izaho manokana: mba tokony hanao ny asany amim-pahamarinana amin’izay ny olona, fa tsy hanao kitoatoa izany sy ho fitiavan-tena fotsiny”, hoy izy.
Tokony ho any am-ponja i Claudine, raha…
“Raha ny tokony ho izy, tsy maintsy miverina any am-ponja ho azy izy, raha mbola tsy tapitra ny fitanana vonjimaika ary tsy mahazo fahafahana vonjimaika izy”, hoy ny Me Razafinjatovo Willy momba ny fahataperan’ny fe-potoana hijanonan-dRazaimamonjy Claudine any amin’ny hopitaly.
Raha, ohatra, mbola te hijanona amin’ny hopitaly izy, misy ny vaomiera manokana tsy maintsy mandinika izany: mbola afa-mijanona izy sa tsia? Raha tsy izany, tsy maintsy mamonjy ny fonjan’Antanimora na Tsiafahy… Ampitoviana avokoa ny vahoaka, na iza na iza voatana: tsy misy tombo sy hala.
Manomboka izao, tokony hiova ny fomba famindra sy ny fomba fiasa: maro ny olona mitovitovy amin’ny trangan-javatra toy ny an-dRazaimamonjy Claudine. “Maninona no izy irery no atao an’izay, fa tsy ny olon-kafa koa?” hoy izy
Tokony hampidirina hodinihina amin’io vaomiera manokana io ny momba ny olona izay tokony ho any amin’ny hopitaly, nefa tsy any akory; na tafahoatra ny fe-potoana ijanonany any.